Fiarovana ny ala: ho avy ny « E-talk » | NewsMada
Fiarovana ny ala: ho avy ny « E-talk »
Sehatra iray hanehoan-kevitra sy fijoroana vavolombelona, ho fanehoana fa afaka mandray an-tanana ny fampandrosoana ny firenena ny tsirairay, ny “E- talk”. Mikarakara izany, isam-bolana, ny masoivoho amerikanina eto amintsika. Ny 21 marsa izao àry, hitodika kokoa amin’ny fampandrosoana miainga amin’ny fitantanana maharitra ny ala ny dinika.
Azo lazaina ho mifanojo indrindra amin’ny olana mitranga eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao, ity hetsika ity. Singanina amin’izany ny faharipahan’ny alan’i Vohibola, any amin’ny faritra atsinanan’i Madagasikara, anaovan’ireo mpikaroka antso avo mihitsy ny tokony handraisana andraikitra, manoloana ny zava-misy.
Mandra-piandry izany, hizara ny traikefany sy ny fahalalany mikasika ny fitantanana maharitra ny ala, amin’ity “E-talk” ity, Razanakoto Andry, mpandalina momba ny fitantanana maharitra ny ala sy ny harena voajanahary ary ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Nitantana tetikasa fampandrosoana maharitra, miompana amin’ny sehatra maro, koa ny tenany. Anisan’izany ny mahakasika ny fanatsarana ny fiainan’ny tantsaha, ny famolavolana paikady hiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro, ary ny fiarovana sy ny fitrandrahana maharitra ny ala sy ny harena voajanahary.
Nianatra tao amin’ny Ecole supérieure des sciences agronomiques, eny amin’ny oniversiten’Antananarivo, izy. Nandranto fianarana, tany Etazonia, tamin’ny alalan’ny vatsim-pianarana Fulbright, nahazoany ny “Master’s Degree in Forest and Natural Resources Management” avy ao amin’ny State University of New York – College of Environmental Sciences and Forestry.